Diinta: Yan la dacarayn! | Doodwadaag waa Danwadaag.
Miyaad hesheen fiidiyowga wareegaya Facebook-ga iyo wadaadka dhahaya: “Alle (sw) ayaa soo dagayo galabka Carrafo, soo dagitaan aysan habboonayn inaad adiga u dhigato sida caqligaada ku jirto…..”
Masiibaduse waxay tahay, in asaga uu ku dhacay waxii uu dadka uga digayay oo sawiray, suureeyay dagitaankii. Markii uu yiraahdo “Alle baa” cirka ayuu eegaa. Markii uu dhaho “soo degeyana” dhulka ayuu farta ku fiiqaa.
Waxa uu ku dhacay ekaysiintii (tashbiihii) uu ka cararayay. Halkaasi waa meelaha ay Ashcariyadu uga leexatay Mushabbihada kuna noqotay caqiiddada Muslimiinta badankood.
Dhanka kale, diintii dhaxdeeda waxaa laga dhigay mid laga raadsado fursado naarta looga dhuunto, Alle (sw) lagu khiyaano amaba waxay ka dhigeen bakhtiyo-nasiib ama ku-nasiibso meel lagu ciyaarayo oo aad u baahan tahay inaad barato xirfadaha bakhtiyoo-nasiibka ama ku nasiibso.
Fakirka ah dhowr maalin oo sanadka kamid ah cibaadayso waa laguu dhaafayaa sanado waxii aad gaysatay, waa kan muuqaalka aan leennahay inoo yeelay. Qofwalbana uu samaynayo waxa uu doono uuna sugayo maalmaha is dhaqitaanka.
Waxaan u baahannahay Muslim masuul ah goor kasta iyo xilli walba. Alle wuu joogaa wuuna nala socdaa xilli walba. Lama siri karo, lagama xeeladaysan karo loomana hoos galin karo. Qofka aad tahay wuu garanayaa ilbiriqsi walba, daqiiqad walba iyo saacad walba.
Waxaa kale oo iyadana la yaable oo aad cajalka ka helaysaa, in wadaadka tiriyay danbiyo aad ugu xun diinta iyo bulshadaba oo la dhaafayo galabta Carrafo, sida qofka daroogada cuna ama iibiya ee ay jeecka uga buuxdo, naagta isqaawisa, tan gogol-dhaafka samaysa…….. Xadiiska haddaba ma sheegayo noocyadaa ee waxa uu ka hadlay danbi-dhaaf guud. Dhibaatooyinkaa-inay yahiin kuwo Alle reebay-ka sokow, waa kuwo bulshada dhib ku ah oo u baahan in siyaabo kale loo xalliyo.
Guud ahaan, dooddan ma aha mid wax taraysa umadda ee waa mid sii burburinaysa. Waana nasiib darro in maanta dadkaa yahiin kuwa diinta u sheegaya, la yaabna ma sii lahaanayso in dhallinyaro ka sii xanaaqday ay dhiigga bannaystaan oo ay umadda laayaan.
Waxaa naftayda iyo tiinnaba ku dardaarminayaa inaan diinta ku noolaanno 24/7 iyo cimrigeenna inta aan noolnahay kana dhaafno in laga dhigo sida turub la cayaarayo, ku nasiibso oo kale, ee waxaa nalaga doonayaa inaan aaminno in Alle marwalba nala joogo, marwalbana aan ka dhowrsanno waxii asaga iyo innagaba aan inoo dan ahayn.